စင်္ကာ​ပူ​သွား​တော​လား၊ | J-Myanmar
“ဟ​လို အစ်မ​ရေ! စင်္ကာ​ပူ​လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​ရှိ​သေး​လား။? ဒီ​တစ်​ပတ် ၊နှစ်​ပတ်​အတွင်း လေ​ယာဉ် လက်မှတ်​ကုန်​နေ​ပါ​တယ်​ရှင်”
ဒါ​က​မြန်မာ​ပြည်​မှာ ကြား​ခဲ​ရ​တဲ့ ဒိုင်​ယာ​လော့​ကလေး​တစ်​ပိုင်း​တစ်​စ​ပါ။ စင်္ကာ​ပူ​ကို​မြန်မာ​တွေ ဘာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်​သွား​နေ​ကြ​ပါ​သလဲ။ တစ်​နေ့​တစ်​နေ့​ကို MAI, SILKAIR လေ​ယာဉ်​တွေ တိုက်ရိုက်​တစ်​မျိုး Bangkok transit တစ်​မျိုး​နဲ့​မြန်မာ​တွေ​နေ့စဉ် ထွက်​နေ​ကြ​လေ​ရဲ့။ တကယ်​တော့ နိုင်ငံ​ခြား​ထွက်​တာ များ​တယ်​လို့​ပြော ဖို့​လည်း​ခက်​ပါ​တယ်။
ချမ်းသာ​တဲ့​နိုင်ငံ​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ ကိုး​ရီး​ယား၊ဂျပန်​လို​နိုင်ငံ​က နိုင်ငံသား ၆-သန်း​က​နေ ၁​၀-သန်း​ခန့်​ဟာ ပြည်​ပ​ကို​ရောက်​နေ​ကြ​တယ်​လို့ မှတ်သား​ဖူး​ပါ​တယ်။ နိုင်ငံ​ခြား​မ​သွား​ကြ​တဲ့ နိုင်ငံ​တစ်​နိုင်ငံ​က နိုင်ငံသား တွေ​ဟာ ဘယ်​လို​မှ​မ​ရင့်​ကျင့်​နိုင်​ပါ။ ပြည်​တွင်း​မှာ​လောကဓံ​ကို​ပြည့်​ပြည့်၀​ဝ​မ​ခံစား​ရ​နိုင်​ပါ။
ဒိ​ပြင် ကိုယ့်​နိုင်ငံ မှာ​နေ​တုန်း​က တစ်​မြို့​တစ်​ရွာ​ကို​ပြောင်း​သွား​ကြ​ပြီ​ဆို​ရင် ဝမ်းနည်း​ကြေကွဲ​စွာ ခံစား​ကြ​ရ ပေ​မယ့်၊ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ စင်​မြင့်​က​နေ​လှမ်း​ကြည့်​လိုက်​ရင် ကိုယ့်​နိုင်ငံ​ရှိ တိုင်း​နှင့်​ပြည်နယ် မြို့​ရွာ​မှန်​သ​မျှ​ကို ကိုယ့်​ရပ်​ကိုယ့်​ရွာ​လို မေတ္တာ​ထား​ခံစား​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဒါ​က​ကြုံ​ဖူး​မှ​သိ​တဲ့​အ တွေ့​အကြုံ လေး​တွေ​ပါ​ပဲ။
ဒို့​နိုင်ငံ​မှာ လူ​တစ်​ယောက် ကြီး​ပွါး​တိုးတက်​လာ​ရင် သူ့​ရပ်​ရွာ​ဒေသ​ကို​သာ​အဓိက စိတ်ဝင်စား​ကြ တယ်​လို့​သိ​ရ​ပါ​တယ်။ သူ့​ရဲ့​အတွေး​အာရုံ​က​ကျဉ်းမြောင်း​နေ​တော့ တစ်​နိုင်ငံ​လုံး​အတွက်​ခံစား​နိုင်​ဖို့ ဝေးကွာ​နေ​ဆဲ​ဖြစ်​နေ​လို့​ပါ။ နိုင်ငံ​တစ်​ကာ​မှာ ဒါ​မျိုး​မ​ကြား​ဖူး​ပါ​ဘူး။ အမေ​ရိ​ကန်​တွေ​ဆို​ရင် တစ်​ကမ္ဘာ လုံး​အရေး ကိုင်တွယ်​ဖြေ​ရှင်း နေ​ရ​ဆဲ​ပါ​ဘဲ။ သူ့​နိုင်ငံ​ပြည်နယ် ၅​၀-အတွက်​အသာ​ထား။ တစ်​ကမ္ဘာ​လုံး​က Refugees တွေ DV-မဲ​ပေါတ်​တဲ့​သူ​တွေ လက်ခံ​ဖြေ​ရှင်း​ပေး​နေ​တုန်း​ပါ​ဘဲ။ ချီး​ကျူး​စရာ​နှလုံးသား ပိုင်​ရှင်​တွေ​ပါ။
ဒါ​ကြောင့်​ဒို့​မြန်မာ​တွေ​ကို​တိုက်တွန်း​ချင်​တာ​က နိုင်ငံ​ခြား​သွား​ကြ​ပါ။ နိုင်ငံ​ခြား​ရောက်​နေ​တဲ့​သူ​တွေ အခွင့်သာ​ရင် ပြန်​ဝင်​ကြ​ပါ​လို့ အကြံ​ပြု​ပါ​ရ​စေ။ ကိုယ့်​ပြည်​ကို​ပြန်​ရောက်​ရင် big heart နဲ့​ပြည်​သူ​ကို အလုပ်​အကျွေး​ပြု​ကြ​ပါ​လို့ တိုက်တွန်း​ပါ​တယ်။ လူ့​ဘဝ​တန်ဖိုး​ကို ပစ္ဆံ amount တစ်​ခု​နဲ့​မ​တိုင်းတာ​သင့်​ပါ။ လူ​သား​တွေ​အပေါ် ထား​နိုင်​တဲ့​မေတ္တာ​နဲ့​သာ တိုင်းတာ​သင့်​ပါ​တယ်။ ငါဟာ​မနှစ်​ကလူ(၁​၀)ယောက်​ကို မေတ္တာ​ထား​နိုင်​ခဲ့​ရင် ဒီ​နှ​စ(္​၁​၅)ယောက်​ကို မေတ္တာ​ထား​နိုင်​အောင် လေ့ကျင့်​ပါ။ ဒါ​မှ​သာ​တိုးတက်​ကြီး​ပွါး​တာ အစစ်​အမှန်​ပါ။
ကိုယ့်​အတွက်​သာ ကိုယ်လုပ်​နေ​လို့​ကတော့ လူ​ဖြစ်​စရာ​တောင် မ​လို​အပ်​ပါ။ တိရစ္ဆာန်​ဘဝ​နဲ့​ပင်​လုံ လောက်​ပါ​တယ်။ လူ​တစ်​ယောက်​ရဲ့​ပေတံ​ဟာ သူ့​ရဲ့ အများ​အပေါ်​မှာ ပြု​နေ​တဲ့ သူ့​လုပ်​အား​ပမာဏ​သာ လျင်​အစစ်​အမှန်​ပါ။
မ​ကြာ​ခင်​တိုင်း​ပြည်​အတွင်း အခွင့်​အလမ်း​သာယာ​လာ​လိမ့်​မယ်​လို့ မျှော်လင့်​ပါ​တယ်။အဲ​ဒီ​အခါ နိုင်ငံ ရပ်​ခြား​မှာ ကိုယ့်​အစွမ်း​အစ ဘာ​မှ​ထုတ်​သုံး​ခွင့်​မ​ရ​ဘဲ ဖြစ်​နေ​သူ​တွေ ၊ဘဝ​ရဲ့​ကျန်​ရှိ​နေ​သေး​တဲ့​နေ့​ရက်​တွေ​ကို ကိုယ့်​တိုင်း ရင်း​သား​တွေ​အတွက် တက်​ညီ​လက်​ညီ အလုပ်​အကျွေး​ပြု​ကြ​ဖို့ သတိရ​ကြ​စေ​ချင်​ပါ​သည်။ မိတ်ဆွေ တစ်​ဦး​ရဲ့​အမေ​က သား​ကို​ငယ်⁠ငယ်​တုန်း​က ဆုံးမသွန်သင်​ဘူး​သ​တဲ့။ “ငါ့​သား​လူ​နာမည် မ​ပြော​ပါ​နဲ့။ ရွာ​နာမည်​သာ​ပြော​ချင်​ရင်​ပြော”၊ဒါ​ကြောင့်​နာမည်​လေး​တွေ​မ​ပါ​အောင်​ပြော​သွား​တာ​ပါ။
နိုင်ငံ​ခြား​ကို​မ​လာ​ရ​သေး​တဲ့​မြန်မာ​မျိုး​ဆက်​သစ်​တွေ လာ​ကြ​ပါ​လို့ ဖိတ်ခေါ်​လိုက်​ပါ​တယ်။ လာ​ဖို့
ရည်​ရွယ် ချက်​ရှိ​ရင် ကြိုတင်​ပြင်ဆင်​ထား​ကြ​ပါ။ အင်္ဂလိပ်​စကား​လေ့ကျင့်​ပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်​အကြောင်း Essay Letter လေး​တွေ အပုဒ်(၁​၀)လောက် အလွတ်​လေ့ကျင့်​လိုက်​ပါ။ Computer နှင့် အခြား​ဗ​ဟု​သုတ​များ​ကို အလုပ်​လုပ်​ယင်း အချိန်​ဖဲ့​ပြီး​သင်​ယူ​ကြ​ပါ။ ကျန်းမာ​ရွှင်လန်း​စွာ ဝတ်စား​ဆင် ယင်​တတ်၊ နေ​တတ်​ထိုင်​တတ်​အောင် လေ့ကျင့်​ထား​ရ​မည်။
ဥပမာ-ပထမ​ဆုံး​မြန်မာ​တွေ Favorite ဖြစ်​တဲ့ စင်္က​ပူ​သွား​ဖို့​ပြင်ဆင်​ကြည့်​ကြ​ပါ​စို့။ ပထမ​အောင်​လက် မှတ်​တွေ​ကို နို​ထ​ရီ​ဘာသာ​ပြန်​လုပ်။ Computer သင်​တန်း​ဆင်း​လက်မှတ်​စ​သည် ရသ​မျှ​ဆောင်​ထား။ စင်္ကာ​ပူ​ရောက်​နှင့်​ပြီး​မိတ်ဆွေ​တစ်​ဦး​နှင့် ဆက်​သွယ်​ပြီး E-Visa တစ်​စောင်​ရအောင် အကူအညီ တောင်း​ကြည့်ပါ။
လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​ကို သက်​တမ်း​သုံး​လ​ဝယ်​ရင် U$475 လောက်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်။ တစ်​လ​အ သွား​အပြန် ဆို​ရင်​တော့ U$380-လောက်​နဲ့​ရ​နိုင်​ပါ​တယ်။ တစ်​လ​လက်မှတ်​ကတော့ ဖောင်​ဖျက် ထား​သ​လို​ပါ​ဘဲ။ မ​စီး​ရင်​အဆုံးခံ​ရ​ပါ​မယ်။ သုံး​လ​လက်မှတ်​ကတော့ အလုပ်​အဆင်​မ​ပြေ​ယင် အိမ်​ပြန်​တဲ့​အခါ ပြန်​စီး​လို့​ရ​မယ်။ Refund ပြန်​ရောင်း​ရင် ကျပ်​ငွေ 70000 လောက်​ရ​နိုင်​တယ်။
Visa Fee က $30ကို credit card နဲ့​ပေး​ရ​တာ​ဆို​တော့ PR ဖြစ်​ပြီး​သူ​က​ကူညီ​နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ Agent ကိုခ်ိုင်း​ရင် ဗီဇာ​ခ $70 လောက်​တောင်း​တယ်​လို့​သိ​ရ​တယ်။ ကဲ​စင်​ကာ​ပူ​သွား​တော့​မယ်​ဆို​ရင် ပစ်​ပို့​မိတ္တူ၊ ဓါတ်​ပုံ​အပို​နဲ့​နဲ့ အောင်​လက်မှတ် မိတ္တူ​လေး​တွေ​နည်း⁠နည်း​ကူး​ထား​ရင်​ကောင်း​တယ်။ Luggage အသင့်​အတင့် တစ်​လုံး​ဝယ်။ သန့်ပြန့်​အချိုး​ကျ​တဲ့ ယူ​နီ​ဖောင်း​လေး​နည်း⁠နည်း​စုဆောင်း။ ကြော​လျှာ​သီး​တွေ ဘာ​တွေ​နဲ့​ဆို​လည်း​ရ​တယ်။
(စကား​ညှပ်) လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​ကို သက်​တမ်း​ဘယ်လောက်​ဘဲ​ရှိ​ရှိ တစ်​လ​အကုန်​တွင် အထွက်​ပြ​မှ Singapore Immigration မှာ အဆင်​ပြေ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ (ဒါ​ကြောင့်fore-show တစ်​လ dateတပ်​လာ​ပါ)။
စင်္ကာ​ပူ​မှာ တည်းခို​ဖို့​အတွက် နေရာ​လေး​တစ်​ခု​လောက်​ကြိုတင်​စီစဉ်​ရ​ပါ​မယ်။ တစ်​လ​အတွက် $350 လောက်​တော့​ကျ​ပါ​မယ်။ deposit တစ်​လ​ကြို​ပေး​ရ​မယ်​ဆို​တော့ $700 လောက်​ဖြစ်​သွား​လိမ့်​မယ်။ MRT Card လို့ခေါ်​မ​လား၊ ကား​လည်း​စီး​လို့​ရ​တဲ့ ကဒ်​ဝယ်​ရ​မယ်။ Phone Card ဝယ်​ရ​မယ်။ $20လောက်ကျ​မယ်။ စကားပြော​ခွင့်128ဒေါ်​လာ တန်ဖိုး​လိုချင်​ရင် $26တန်​ကဒ်​ထည့်​ရ​မယ်။
စင်္ကာ​ပူ​အဝင်​မှာ white card ဖြည့်​တဲ့​အခါ တည်းခို​မယ့်​လိပ်စာ​ကို​တိတိ​ကျ⁠ကျ​ရေး​ပြ​နိုင်​ရ​မယ်။ တစ်​ခါ​က​တည်း​မယ့်​လိပ်စာ​မ​ရေး​ပြ​နိုင်​လို့ အမေ​ရိ​ကန်​မှာ​နေ​ဖူး​တဲ့​ဆရာတော်​တစ်ပါး​ကို တောင်​မှ​လေ​ဆိပ် က​ပြန်​လွှတ်​ဖူး​တယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ကြိုတင်​ပြီး​လိပ်စာ​လေး​တွေ ရှာ​ထား​ပါ။ Name card လေး​ပါလာ​ယင်​တော့ အကောင်း​ဆုံး​ပါ​ဘဲ။ ပတ်စ်​ပို့​လေး​ကို အဖုံး​လေး​နဲ့​သပ်သပ်​ရပ်⁠ရပ်​ဆင်ယင်​ထား​သင့်​ပါ​တယ်။ ပြီး​ရင် လိပ်စာ​ကဒ်​လေး ဓါတ်​ပုံ​လေး​တွေ white card တွေ​ညှပ်​ထား​လို့​ရ​တာ​ပေါ့။ ကိုယ့်​ရဲ့​တစ်​ကိုယ်​ရေ​အသုံး အဆောင်​လေး​တွေ​ဟာ ကိုယ့်​ဘဝ​အဆင့်​အတန်း​ကို အထောက်​အကူ​ပြု​ပါ​တယ်။
စင်္ကာ​ပူ​ရောက်​တဲ့​အခါ ကိုယ့်​လေ​ဆိပ်​လို​မဟုတ်​တော့​သေး⁠သေး​လေး​မဟုတ်​တော့​ဘူး။ Arrival Hall လို့​ဆို​တဲ့​စာ​တမ်း​ကို ကြည့်​ပြီး လိုက်​သွား​ရုံ​ပါ​ပဲ။ မန္တလေး​စကား​နဲ့​ပြော​ရင် နှစ်​ပြ​လောက်​လိုက်​သွား​ပြီး အောက်​ထပ်​ဆင်း​သွား​ရင် Immigration ကို​တွေ့​မယ်။ အများနည်း​တူ​တန်း​စီ​လိုက်​ပါ။ ကိုယ့်​အလှည့် ရောက်​ရင် passport, white card နှင့်​လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​ကို တစ်​ပြိုင်​နက်​တင်ပြ​ရ​မယ်။ ငွေ​ပါ​လား​လို့​မေး​လာ​ယင်​ပြ​ဖို့ U$300-400လောက်​ကိုင်​ထား။ များ​လေ​ကောင်း​လေ​ပါ​ဘဲ။ ICA အရာရှိ​ကို​ပြုံး⁠ပြုံး​လေး​ဂရု​တစ်​စိုက်​ဆက်ဆံ​ပါ။ မေတ္တာ​ပွါး​ယင်​ပို​သင့်တော်​ပါ​တယ်။
Visa ရက်(၃​၀)သုံး​ဆယ်​ရ​ပြီး​တာ​နဲ့ ရန်ကုန်​မှာ​မိမိ​အပ်ခဲ့​သော​ပစ္စည်း​များ​ကို Belt လို့ခေါ်​တဲ့ လည်​နေ တဲ့​ခါး​ပတ်​ကြီး​မှာ မိမိ​စီး​လာ​တဲ့​လေ​ယာဉ်​နံပါတ် MI 517 (သို့) MI 518 ဟုတ်​ရဲ့​လား​ကြည့်​ရှု​စစ်ဆေး​ပြီး စောင့်​နေ​ပါ။ တွန်း​လှည်း​တစ်​ခု​ကိုင်​ပြီး​စောင့်​နေ​ပါ။ ကိုယ့်​အထုပ်​မှာ ကိုယ့်​နာမည် Receipt နံပါတ်​တိုက်​ကြည့်​နိုင်​ပါ​တယ်။ အထုပ်​ကို​ယူ​ပြီး​ရင် Green Chanel လို့ခေါ်​တဲ့ Custom မှာ အစစ်​မ​ခံ​ဘဲ ဒါ​ရိုက်​ထွက်​လာ​ခဲ့​လို့​ရ​ပါ​တယ်။
လှမ်းခေါ်​ရင်​တော့ Scan ဖတ်​ပြီး​အစစ်ခံ​လိုက်​ပါ။ စင်္ကာ​ပူ​လေ​ဆိပ်​မှ ဝေး​တဲ့​နေရာ​ဟာ Taxiနဲ့​ဆို​ရင် $25-30 လောက်ကျ​မယ်။ MRT ရှာ​ပြီးစီး​ရင်​တော့ $2လောက်​အိမ်​နဲ့​အနီး​ဆုံးLocation ကို​ရောက်လာ​လိမ့်​မယ်။ MRT က Terminal2မှာ​ရှိ​တယ်။ Terminal 1 က “ရထား”ကလေး​စီး​ပြီး Terminal 2ကို​ကူး​ရ​ပါ​တယ်။ တစ်​နာရီ​အတွင်း​မိမိ​တည်းခို​မယ့် Location ကို MRTက​ပို​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ပြီး​မှ​အီမ်​ကို​ဖုန်း​ဆက်​ပြီး Bus ကား​စီး​သွား​ရင်​ရ​နိုင်​ပါ​တယ်။
နောက်​နေ့​ကျ​ရင် ရထား​ကဒ် ဖုန်း​ကဒ်​တွေ​ဝယ်​ယူ​ပြီး နီးစပ်​ရာ​မြန်မာ​ကျောင်း​တွေ​သွား​နိုင်​ပါ​တယ်။ စင်္ကာ​ပူ​အနောက်​ဘက်​မှာ​ဆို​ရင် ဒေါက်​တာရာ​ဟု​လာ​တို့​အဖွဲ့​တည်ထောင်​ထား​တဲ့ က​လ​မ​တီ​ကျောင်း​ကို သွား​လည်​ပြီး လေ့​လာ​စုံစမ်း​နည်း​နာခံ​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။
နိုင်ငံ​ခြား​သွား​ခြင်း​သည် စည်းစိမ်​ခံစား​လို​၍​သွား​ခြင်း​မဟုတ်​သကဲ့သို့ စစ်​သား​များ​ရှေ့​တန်း​ထွက်​သကဲ့သို့ သဘောထား​သင့်​ပါ​သည်။ တစ်​ခါ​က​စင်္ကာ​ပူ​နေ​ရခိုင်​အမျိုးသား​တစ်​ဦး ထုတ်ဖော်​ပြော ဆို​တာ​ကြား လိုက်​ရ​ပါ​သည်။ အို အင်္ဂလိပ်​ခေတ်​က​ကို​လို​နီ​ခေတ်​ဆို​တော့ ကိုယ်​စိုက်​တဲ့​ဟင်း​ကို ခူး​ချင်​တိုင်း​မ​ခူး​ရ၊ ကိုယ်​မွေး​ထား​တဲ့ ဘဲ​တွေ ကြက်​တွေ ကိုယ့်​ဆန္ဒ​အတိုင်း​စီမံ​ခွင့်​မ​ရှိ။ တိုင်း​တစ်ပါး​သား လာ​ရောက်​ကျွန်​ခိုင်း​တာ​ခံ​နေ​ခဲ့​ကြ​ရ​တယ်။ နှစ်​၁​၀​၀ နီးပါး​ပါ​ဘဲ။ မြန်မာ​တွေ လွပ်​လပ်​ရေး​ရ​တဲ့​အခါ ကြွေးကျော်​ကြ​တယ်။ ကိုယ့်​မင်း​ကိုယ့်​ချင်း​နဲ့​ရွှေ​ခေတ်​ရောက်​တော့​မယ်​စ​သည်​ဖြင့် အံ​ကြိတ်​ကာ ဥဒါန်းကျူး​ခဲ့​ကြ​သ​တဲ့။
သို့သော်​လည်း​ကံ​မ​ကောင်း​သည်​အားလျော်စွာ န်ိုင်​ငံ​ခြား​သား​က​ကျွန်​ခိုင်း​ဘို့ မ​လာ​ကြ​တော့​ပေ။ မိမိ​ကိုယ်တိုင် ပညာ​တွေ​အများ​ကြီး​တတ်​အောင် သင်​ပြီး​နိုင်ငံ​ခြား​သား​ရှိ​ရာ အိမ်​တိုင်​ရာ ရောက်​လိုက်​သွား​ပြီး သူ့​ကိုခ်ိုင်း​ပါ၊ ငါ့ကို​ခိုင်း​ပါ အလုအယက်​လုပ်​နေ​ကြ​ရ​ပြန်​တော့​တယ်။ အခိုင်း​ခံ​ဖို့​အတွက် ပစ္တံ​တွေ​တောင်​မှ ပေးလိုက်​ကြ​ရ​တော့​တယ်။ အော် သူ​ပြော​တာ​က​ဘဲ တကယ်​ပင် မှန်​နေ​ရော့​သလား။ ကယ် ထား​လိုက်​ပါ​တော့၊ ဘာ​တွေ​ဆက်​လုပ်​ကြ​မ​လဲ၊ အလုပ်​ဘဲ​ရှာ​ကြ​ရအောင်။
(စင်္ကာ​ပူ ဘာ​ပဲ​လုပ်​လုပ်,စာ​ရွက်​စာ​တမ်း အတူတူ ဖြစ်​စေ​ရ​မယ်၊ ဒါ​ကြောင့် ပထမ​ဆုံး အလုပ်​လျောက်​တုန်း​က Documents တွေ​ကို အသေ​အချာ​သိမ်းထား​ပါ)
နံနက်​စောစော​သတင်းစာ​ဖတ်​လျှင် အလုပ်ခေါ်ကြော်​ငြှာ​ကို​ဖတ်​ပြီး ကပ်​ကြေး​နှင့်​ဖြတ်​ကာ​မိမိNote bookမှာ​ကပ်ထား။ ပြီး​ရင် Email နဲ့ နံနက် (9:AM) မ​တိုင်​မီ ပို့​ပေး​ရ​လိမ့်​မယ်။ CV-Form မှာ​ဓာတ်​ပုံ​လှ⁠လှ​လေး​ကပ်၊ဒါ​မှ အင်တာဗျူး​ရ​နိုင်​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ကြော်​ငြာ​ကို ဘာ​ကြောင့်​စု​တောင်း ထား​ရသ​လဲ ဆို​တော့ အကယ်၍ အင်တာဗျူး​ရ​ယင် ဘယ်​ကုမ္ပဏီ​က ခေါ်​တယ်​ဆို​တာ သိ​ဖို့​သိပ် အရေးကြီး​တယ်။
ပြီး​နောက် Biography ရယ် Education background ရယ် Experiencesတွေ Responsibilityတွေ များ⁠များ​ထည့်​ပေး​ပါ။အင်တာဗျူး​ရ​ဖို့​တော့ ဘုန်းကြီး ကျောင်း​မှာ​ဆုတောင်း လိုက်​ယင် အဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။
အင်တာဗျူး​ရ​ရင်​ကြိုတင်​ပြင်ဆင်​ပါ။လှ​လှပ​ပ​ဝတ်စား​ဆင်ယင်​ပြီး​စ​တိုင်​ကျ⁠ကျ​သွား​ဖို့​သတိပြု​ပါ။ဒီ​မှာ​ပုလိပ်​က​အစ၊သရုပ်ဆောင်​မင်းသား၊မင်းသမီး​လို​ပဲ​အလေး​ထား​ပြီး ဝတ်ဆင်​ကြ​တယ်။သိပ်​ပြီး​တော့​လဲ အလှ​အပ​နဲ့ အသန့်​အရှင်း ကို​ကြိုက်​တဲ့​နိုင်ငံ​ပါ​ပဲ။
အတိတ်​ကုသိုလ်​ကံ အားနည်း​လို့ ချက်ချင်း​အလုပ်​အဆင်​မ​ပြေ​ဘဲ ကိုယ်​ဆင်းရဲ စိတ်​ဆင်​ရဲ​ခံ​ကြ​ရ​မည့် သူ​တွေ​အတွက် ဆင်းရဲ​ဒုက္ခ၊ဘေး​အန္တရာယ်​ကို တားဆီး​ရန် ရည်​ရွယ် ပြီး ဂျို​ဟိုး​မှာ ဇ​ယ​မင်္ဂလာ ဗုဒ္ဓ​ဝိ​ဟာ​ရ​ကို​တည်ထောင်​ဖွင့် လှစ်​ထား​ပါ​တယ်။
ရန်ကုန်​က ပထမ​ယူလာ​တဲ့ E-Visa ကုန်​ခင် အနည်း​ဆုံး​နှစ်​ရက်​သုံး​ရက်​လောက်​မှာ Singapore ကို​ကပ်​ပြီး​ဝင်​လာ​ဖို့​လို​ပါ​တယ်။ Visa အသစ်​လျောက်​တာ​က ပို​ကောင်​ပါ​တယ်။ ယုတ္တိ​ရှိ​အောင် ရန်ကုန်​ပြန်​မည့် လေ​ယာဉ်​လက်မှတ်​နှင့် ရက်စွဲ​ကို​တော့ တိတိ​ကျ⁠ကျ​ပြန်​ဆင်​ထား​ပါ။ white card မှာ တောင်း​ထား​တဲ့​ရက်​နှင့် စင်္ကာ​ပူ​မှ​ထွက် ခွာ​မည့် လေ​ယာဉ်​လက်မှတ် (fore-show) တို့​ကိုက်​ညီ​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​အချက်​ကို အထူး​သတိထား​ကြ​ပါ။
Show money မေး​ရင် ပြ​နိုင်​အောင်​လည်း စင်္ကာ​ပူဒေါ်​လာ (200/300 )လောက်​တော့ ဆောင်သွား​လိုက် ပါ။အင်​မ​ဂ​ရေး​ရှဲင်း​ရောက်​ရင်​ရုပ်​လည်း​ချော​သဘောကောင်း​မယ်​လို့​ထင်​ရ​တဲ့ တရုတ်​မ​ဆီ​ကို ရွေး​ပြီး ဝင်​ကြည့် လိုက်​ပါ။ ပို​ကောင်း​တာ​ကတော့ taxi နဲ့​ဝင်​လာ​ခဲ့​ပါ။ Taxi ခ $40 ပေး​ရင် အိမ်​ရောက်​အောင်​ပို့​ပေး​လိမ့်​မယ်။စင်္ကာ​ပူ​က​ကား​လေး​တွေ​နဲ့​ကြုံ​ရင်​တော့​အကောင်း​ဆုံး​ပါ​ပဲ။ ဒီ​တစ်​ခါ​တော့ မီး​ကုန် ယမ်း​ကုန်၊အစွမ်း​ကုန်၊အလုပ်​ရှာ​လိုက်​ရင် အဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။။(မြန်မာ​တွေ​အောင်မြင်​ကြ​ပါ​စေ)
Next post ဂျပန်​ကပ်​ကြေး​ကိုက်
Previous post ကမ္ဘာ့​တန်​ကြေး​အမြင့်​ဆုံး ဂီ​တ​ပညာ​ရှင် Dr. Dre